Taaliban ayaa dalalka Islaamka u dirtey qeeylo dhaan | warsanradio baydhabo
Madaxweyne Xasan Sheekh oo sheegay in wax wada-hadal...
Dhageyso;- Warka Galabnimo ee Idaacada Warsan
Booliska Soomaaliya oo ku dhawaaqay howlgallo ka dhan...
Dhageyso:-Warka Duhur ee Radio Warsan
Shirka Madaxda IGAD oo Maanta ka furmaya Nairobi...
Shiinaha oo iska fogeeyay eedeyn uga timid Mareykanka
Ciidanka NISA oo howlgal gaar ah ka fuliyay...
Dhageyso:-Warka Subax ee Radio Warsan
Dhageyso:-Warka Fiidnimo ee Radio Warsan
Home WARARKA MAANTA	Taaliban ayaa dalalka Islaamka u dirtey qeeylo dhaan
Taaliban ayaa dalalka Islaamka u dirtey qeeylo dhaan
written by warsan radio 21/01/2022
Ra’iisul wasaaraha Taliban Mullah Mohammad Hassan Akund
Ra’iisul wasaaraha Taliban ayaa Arbacadii ku booriyay dalalka Islaamka inay aqoonsadaan dowladooda. Afgaanistaan, oo ku tiirsan kaalmada shisheeye, ayaa maalmahan dhaqaale ahaan burburay.
Ilaa hadda ma jiro waddan aqoonsan Taliban. Hadda qof kastaa wuxuu eegayaa sida Taalibaan, ay u hogaamiso Afghanistan. Markii ugu horeysay ee Taliban ay xukunka la wareegeen Afgaanistaan ​​​​1996, waxay caan ku ahayd xadgudubyada xuquuqda aadanaha.
Si kastaba ha ahaatee, markan Taliban waxay sheegtay in shareecada adag ee ee ay ku maamulayeen la khafiifin doono laakin hadda intii ay jirtay xukuumadda Taalibaan, haweenka ayaa laga tuuray shaqooyinkii dowladda, gabdhaha xitaa ma awoodaan in ay iskuulada aadaan.
Isagoo ka hadlayay shir jaraa’id oo uu Arbacadii ku qabtay magaalada Kabul, Ra’iisul Wasaaraha Taliban Mullah Mohammad Hassan Akhund ayaa yiri, “Waxaan ka codsanayaa dalalka Muslimka ah inay si rasmi ah noo aqoonsadaan, intaas kaddib waxaan rajeyneynaa inaan si degdeg ah ugu soconno waddada horumarka. Taalibaan waxay buuxisay dhammaan shuruudaha lagama maarmaanka u ah soo celinta nabadda iyo amniga.”
Sida laga soo xigtay wargeyska Tolo News ee Afgaanistaan ​​ka soo baxa, Mullah Akhund wuxuu yiri, “Waa inaan mar dambe la sugin aqoonsiga dalalka Islaamka, aqoonsi la’aanta awgeed, waxaan wajahaynaa dhibaatooyin heerar badan ah, oo uu dhaqaalaha ugu horreya sidaas haddii dhaqaalaha isbaddalo, markaas Afgaanistaan ​​​​waxaa laga yaabaa inay ka baxdo. dhibaatada taagan.
Afgaanistaan ​​waxaa hareeyay dhibaatooyinka dhanka musiibooyinka bini’aadantinimo. Tan iyo markii Taliban ay la wareegeen awoodda Afgaanistaan ​​bishii Ogosto ee sannadkii hore, dalalka reer galbeedka ayaa jaray kaalmada caalamiga ah, waxayna la wareegeen hanti balaayiin doolar ah. Afgaanistaan ​​waxay si buuxda ugu tiirsanayd dalalka hela kaalmada shisheeye markii ay meesha ay ka talinaysay dawladdii hore ee Maraykanku taageerayey.
Tan iyo markii ay Taliban talada la wareegtay, xitaa shaqaalaha dowladda ma helaan mushaar. Arbacadii, Ururka Shaqaalaha Caalamiga ah ayaa sheegay in shan kun oo qof ay shaqooyinkoodii ku waayeen gudaha Afgaanistaan ​. Haweenka ayaa dhibaatada ugu daran soo gaartay. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in kala bar dadka Afgaanistaan ​​ay soo wajahday xaalad cunto yari.
Doorka Pakistan ay ku leedahay dib u soo celinta Talibaan ayaa sidoo kale dad badan ay u arkaan shaki, laakiin Pakistan wali ma aysan siin aqoonsi rasmi ah dowladda Taliban. Si kastaba ha ahaatee, xiriirka diblumaasiyadeed ee Pakistan ayaa weli jira. Qadar waxay ahayd dhexdhexaadiye markii ay Maraykanka iyo Taalibaan wada hadlayeen, laakiin iyadana wali ma aysan aqoonsan.
Bishii Sebtembar ee sannadkii hore, Qadar ayaa muujisay sida ay uga xun tahay mowqifka Talibaan, kaddib markii ay la wareegtay hoggaanka Afgaanistaan.
Qadar ayaa sheegtay in go’aanka Taliban ay ka qaateen gabdhaha uu yahay mid niyad jab leh. Waxa ay sheegtay in uu yahay go’aan dib u habeyn ah. Wasiirka arrimaha dibadda Qadar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ayaa yiri: “Taalibaan waa inay eektaa sida maamulka islaamiga ee Qatar uu wax u maamulo.
Taaliban ayaa dalalka Islaamka u dirtey qeeylo dhaan was last modified: January 21st, 2022 by warsan radio
laamaha Amniga Galmudug oo baadi goobaya maleeshiyaad dilal geystay
Puntland oo faah faahisey halka ay mareyso Nabadeynta beelo dagaalamay
DAAWO SAWIRO: KHABIIR SARE OO U DHASHEY DALKA JARMALKA OO MAANTA LA KULMEY GOLLAHA WASIIRADA KGS
James Swan” Doorashada Golaha Shacabka Soomaaliya waa in si deg deg ah loo soo geba-gabeeyaa”
Daawo Video Wareysigii Qiibtii Labaad Abwaan Tarash DM oo Runta Usheegay Muxuu Ka Sheegay?
Xaafaha kala ah Isha A iyo Howlwadaag B oo caawa tartan aqooneedka ka socda Idaacada Warsan ku balansan
Soomaaliya oo ka qeyb gashay shirka Wasiirradda Maaliyadda ee dalalka Carabta
Dhageyso-xaflad lagu tagerayo malaqa besha qomal oo lagu qabtay Magaalda muqdisho
Farmaajo iyo Xasan Sheekh oo u soo gudbiyay wareegga ugu dambeeya
Dab Khasaaro geystay ka kacay Goobo Ganacsi oo ku yaalla Walanweyn
Xildhibaanadda Golaha Shacabka Oo Maanta kulan ku leh Muqdisho
DIGNIIN LAGA BIXIYEY DHULALKA LA ISKU QABSADO EE BAYDHABO KU YAALA